'सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै प्याकेज ल्याउन सकेन' ! - Lokpath Lokpath
२०७७, २६ असार शुक्रबार १८:५२
‘सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै प्याकेज ल्याउन सकेन’ !
प्रकाशित मिति : २०७७, २६ असार शुक्रबार १८:५२
काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनैपनि राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
आयात निर्यात व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिड १९ का कारण उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको तर सरकारले राहत दिन कुनै स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको बताएका हुन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा भेला भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ठप्प भएको व्यवसायीक क्षेत्रलाई रेस्क्यु गर्ने प्याकेज नल्याउँदा अचम्म लागेको बताएका छन् । नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अनुप बहादुर मल्लले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रको साइकल कायम राख्न कुनै पनि कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई रेस्क्यु गर्ने भन्दा पनि ट्याक्स तिर्न दवाव दिने र बैंकले पनि व्यवसायीको खाताबाट रकम तान्दिने प्रवृतिले समस्या बढेको बताए । सरकारले रिफाइनान्सको प्याकेज घोषणा गरेपनि लिनै नसकिने सर्तहरु राखेकाले कुनै औचित्य नभएको उनले बताए ।
व्यवसायी दुर्गा विक्रम थापाले आयात निर्यातको लागत बढेको बताए । कुनैपनि वस्तु आयात गर्दा वा निर्यात गर्दा पाँच गुणा लागत बढेको तर सरकारले आयात निर्यातमा सहज वातावारण बनाउन कुनै चासो नदेखाएको बताए । उनले पहिला ३ डलरमा हुने ढुवानी लागत बढेर अहिले १४ डलर पुगेको बताए । धागो उद्योगी रामचन्द्र संघाईले पनि उत्पादित वस्तुको अर्डर नै नआउँदा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि मात्रै छुट्टै स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दएका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए मात्र सरकारको आम्दानी बढ्ने भएकाले पनि व्यवसायीक क्षेत्रलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल बैंक लिमिटेडले २ अर्ब ५५ करोड